Jacket - omunye izakhi eziyisisekelo ikhabethe zabesifazane. He is esisebenzayo, kulula kakhulu ukusebenzisa futhi kufanelekile ibhizinisi isitayela, futhi kusihlwa out. Syech, ekuqaleni yenzelwe kuphela amadoda, ekuqaleni khona kwabo bathunga ikakhulu ngesitayela ezempi, okuyinto ethandwa kakhulu manje futhi insikazi. Kuyinto engenakwenzeka ukucabanga wesimanje ezisemadolobheni ngaphandle ibhantshi noma ijazi.
entwasahlobo Fashion jackets zabesifazane kanye ehlobo 2013 lingama e imibala emnyama. Omnyama, onsundu, onsundu, oluhlaza amnyama, grey - lena imibala zabo eziyinhloko. isitayela Military kusikisela lapels, amabhande ububanzi, izinkinobho ezinkulu, ngisho phezulu. Naphezu kwalezi zimo ezinhle tincenye Decor, jackets zabesifazane ngesitayela sebutho asizange ukufihla ubufazi, ngisho kunalokho, ukugcizelela isithunzi sibalo.
Ukuze romantic izintokazi imfashini jackets inkathi abesifazane entwasahlobo-ihlobo 2013 ethulwa ngesimo jackets iDemo ukukhanyisa iyashintsha iyaphupha ibe shades. Gqoka lezi jackets kungaba ne leggings, jeans, ibhulukwe ne okhalweni okusezingeni eliphezulu umphetho wengubo ngisho Fluffy nokukhanya lace. shades ukukhanya Syech abesifazane iphelele for summer kusihlwa ukungcebeleka - abagcinanga kuyoba ngaphezu kakhulu kuya ingubo chiffon noma isiketi, kodwa futhi Ekuvikeleni hlala kusihlwa noma umoya. Inhlanganisela jacket ne jeans - Lukhulu nsuku zonke, kanye ibhulukwe - lwesikhundla kanye ibhizinisi emihlanganweni.
Abesifazane fashion jackets 2013, futhi eyethulwe onobuhle ngesitayela Oriental, Tweed, e isitayela Koko Shanel, futhi side - Cardigans. Intwasahlobo nekwindla ehambisana noboya jackets. umhlobiso Kuhle kakhulu ibhantshi noboya - ibhande ububanzi futhi ngempumelelo. jackets side futhi zibukeka zizinhle lihambisana ibhande - ke zibukeke kwenza isibalo esincane ngaphezulu, ongaboni kwandisa ubude imilenze. Nokho, izintokazi ngesibindi ewubuciko kule sizini uzokwazi ulinge, nokuphuma ngamabomu liluhlaza, wagcizelela-owesilisa imodeli isoka jackets ngesitayela. Abaklami Famous uthanda e Kulokhu, egqamile kakhulu futhi ahlotshiswe - kusuka red coral kuya ukuphrinta ingwe.
Amantombazane asemancane ukukhuthalele ukuya emaphathini futhi nightclub nazo akuhambile abaklami ziyasibona - abazikhethayo anhlobonhlobo jackets izindwangu shiny. Syech kwabesifazane abasha asebenzayo futhi inikeza onobuhle yoqobo imikhono esifushane noma ngisho ijazi ngokuphelele. Long, ukufinyelela acishe maphakathi nawo-senyonga le jacket ubukeka ngokuphelele unsportsmanlike ngokungafani ivesti zakudala.
jackets I imfashini kakhulu abesifazane (isithombe)
Naphezu ukuhlukahluka imodeli uhla jackets, amamodeli ethandwa kakhulu kwesizini entwasahlobo-ihlobo izohlala zakudala, side noma mfushane, kodwa ngaso sonke isikhathi ifomu esinamathelayo imodeli shades ezolile lihambisana ibhande inkinobho eyodwa eteyipini, noma ngokuphelele ngaphandle izinkinobho, kanye nanoma yimiphi eminye anchorages. Nokho, izincomo esiqinile lapho ukhetha ibhantshi kule sizini entwasahlobo-ihlobo 2013 akuyona, ngakho njalo owesifazane angakhetha imodeli ngokusho ukunambitheka yakho, efanelekayo ukuze isimo esithile.
Umlingisi Alexander Efimov: Biography, umsebenzi nomkhaya okudala
Islands e China: Hainan. Iholide, izinkambo, abahambi Izibuyekezo
Isenzakalo esidume kunazo zonke emadolobheni Italian. Italian lizisho
Massage eshaywayo - ithuluzi enkulu yokulwa ukukhwehlela in abadala nezingane
Inyama in Italian